RoboForex Broker ukubuyekeza 2021 - Kumele Ufunde! Ingabe RoboForex Ube Forex Broker? - ForexMT4Indicators.com
Ikhaya Forex Broker Izibuyekezo RoboForex Broker ukubuyekeza 2021 - Kumele Ufunde! Is RoboForex a Safe Forex...
RoboForex Broker ukubuyekeza 2021 - Kumele Ufunde! Ingabe RoboForex Ube Forex Broker?
1 Mayelana Nenkampani
2 RoboForex Ukuhweba Platforms
4 Izimo ezikhethekile kuma-akhawunti e-Prime
6 Bonus & Amaphromoshini
7 Ukuphepha & Ukuphepha Kokusebenzisa RoboForex
8 Isinqumo Sokugcina
I-RoboForex ikhula ngokushesha kumthengisi odumile, eyasungulwa ngo 2009 futhi isebenza emazweni amaningi emhlabeni jikelele. Unyaka nonyaka, isizindalwazi sama-akhawunti weklayenti le-RoboForex sikhula ngaphezu kwalokho 100,000 amayunithi futhi okwamanje kuyadlula 4 izigidi zama-akhawunti. Ukuthembeka komdayisi kuqinisekiswa yilayisensi ye-IFSC Belize.
Umdayisi wamazwe ngamazwe unikeza ukufinyelela ekuhwebeni 7 izinhlobo zempahla, njenge Forex, Izitoke, Izinkomba, Izinsimbi – ngaphezulu 12,000 izinsimbi sezizonke. Ukuqala ukusebenza ezimakethe zezimali, kwanele ukufaka 10 USD.
Imikhiqizo yezezimali ehlinzekwa yi-RoboForex ihloselwe abathengisi abanokuhlangenwe nakho okuhlukile, kusukela kwabaqalayo ukuya kochwepheshe. Ngezinhloso ezahlukene zokuhweba, inkampani eyakhiwe 5 izinhlobo ze-akhawunti. Uma kuphakama noma yimiphi imibuzo, iklayenti lingahlala lixhumana Nosekelo Olubukhoma, ekhulumayo 11 izilimi futhi izobasiza 24/7.
RoboForex Ukuhweba Platforms
Ukusebenza ezimakethe zezimali nge RoboForex, amaklayenti angakhetha eyodwa yezixazululo zakudala zokusika, I-MetaTrader 4 kanye ne-MetaTrader 5, ezidume kakhulu phakathi kwamalungu omphakathi wabahwebi.
Abahwebi abafuna ukungena ezimakethe zomhlaba bangasebenzisa inkundla yesizukulwane esisha ebizwa nge-R StocksTrader, okunikeza ukuhweba amasheya wangempela. Ngaphandle kwalokho, inkampani inikeza izixazululo zayo zobunikazi kulabo abakhetha ukuhamba: inkundla yewebhu ye-R WebTrader kanye nohlelo lokusebenza lwe-R MobileTrader.
Ngaphezulu 12,000 amathuluzi ayatholakala ukuze ahwebe: Izitoke, Izinkomba, Ngaphezu kwe 40 currency ngazimbili, Ama-CFD, Ama-ETF, kanye nezinsimbi, yezimbiwa, kanye Amandla.
Okuningi mayelana nempahla e-RoboForex ->
Izimo ezikhethekile kuma-akhawunti e-Prime
Amaklayenti we-RobоForex angahweba ngezimo ezingcono kakhulu zemakethe kuma-akhawunti we-Prime. Lawa ma-akhawunti asabalale ukusuka 0 amapipi, khulisa inani lifika 1:300, kanye nekhomishini encishisiwe yevolumu yokuhweba eyisigidi esingu-$1 - $10.
Funda kabanzi mayelana nezimo eziyinhloko ->
I-RoboForex inikeza ukusabalala okuqinile kusuka 0 pips kuma-akhawunti we-Prime kanye ne-ECN, futhi kusukela 1.3 pips ku-Pro kanye ne-ProCent. Kulabo abahweba nge-R StocksTrader, ukusabalala okuncane kuyinto $0.01.
Enye inzuzo kumakhasimende omthengisi yithuba lokufaka nokukhipha izimali ngaphandle kwamakhomishini. Ukufakwa kwezimali kuhlala kungenakhomishini ngoba i-RoboForex inxephezela noma yiziphi izimali zokufaka. Ukuhoxiswa kwezimali ngaphandle kwekhomishini kuyatholakala kabili ngenyanga.
I-RoboForex inikeza amaklayenti ayo ngezinhlelo ezihlukahlukene zamabhonasi:
Okunye okwengeziwe $30 ukuqala ukuhweba.
Ibhonasi Yokwabelana Ngenzuzo
Kuya ku 60% yezinye izimali ezingeke ziphelelwe yisikhathi ngesikhathi "sokuhlehlisa".
Kuya ku $50,000 kusukela kwidiphozithi yokuqala.
Ngaphezu kwalokho, Amakhasimende e-RoboForex angakhuphula inzuzo yawo yokuhweba ngokubamba iqhaza ezinhlelweni zenkampani, njengokuthi “I-Cashback (Izaphulelo)” kanye nokuthi “Kuze kube 10% kwibhalansi ye-akhawunti”. Abahwebi nabo bangazuza kwezinye izipesheli, Ngokwesibonelo, Khuphukela ku 1:2000 kanye neseva yamahhala ye-VPS.
Ukuphepha & Ukuphepha Kokusebenzisa RoboForex
I-RoboForex ingumthengisi olawulwayo onelayisensi yi-IFSC Belize. Ngaphezu kwalokho, inkampani iyilungu le-The Financial Commission kanye nesikhwama sayo sesinxephezelo futhi inesitifiketi sekhwalithi yokusebenza Verify My Trade (I-VMT), okuqinisekisa ukuhambisana nezidingo eziqinile zeKhomishana Yezezimali.
Enye into esiza inkampani ukuthi inikeze izinga eliphezulu lezimali zamakhasimende’ ukuphepha wuhlelo lomshwalense we-Civil Liability olunomkhawulo wama-€5,000,000, okuhlanganisa ukukhava okuhamba phambili emakethe ngokumelene nokweqiwa, ukukhwabanisa, amaphutha, ukunganaki, kanye nezinye izingozi ezingase ziholele ekulahlekelweni ngokwezimali kwamakhasimende.
I-RoboForex iyisinqumo esihle kakhulu sabathengisi abananoma yisiphi isipiliyoni. Siyabonga ngezinhlobonhlobo ezinhle zezinhlobo zama-akhawunti namathuluzi okuhweba, i-broker ifanele kokubili abaqalayo nabadayisi abanolwazi. Ngaphezulu kuka 10 iminyaka yomlando wayo, inkampani ifakazele ukuthi ithembekile. Ngokuhambisana nalokhu, I-RoboForex ihlale ithuthukisa imikhiqizo namasevisi ayo ukuze amaklayenti enkampani akwazi ukuvula amathuba amasha futhi ahlole amathuluzi amasha okuhweba..
Isiqephu esedluleSpearman Rank Correlation Histogram Izaziso MT5 Indicator
Isihloko esilandelayoUmhlahlandlela wokuvula i-akhawunti ye-RoboForex